Nkpọrọgwụ akwukwo nri | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nkpọrọgwụ akwukwo nri
Potato Ọgaranya - Potato Potato
A ụtọ nduku bụ ebe okpomọkụ osisi na-atọ ụtọ vaguely dị ka a ụtọ nduku. N'agbanyeghị mmalite nke ebe ndịda ya, ọ nọgidesiri ike n'etiti etiti. Mgbe ọ na-eto eto, ọ na-agbasa n'ala, dị ka osisi vaịn, na-agbanye mgbọrọgwụ. Ọ bụ tubers ndị a nwere ike ịnakọta, esi nri ma rie.
Carrots na-erite uru, nsogbu na ihe onwunwe nke ngwaahịa
Carrots bụ ihe oriri nkịtị nke a na-ejikarị eme nri na ụwa. A na-etinye carrots na salads, soups, osikapa, sws. Site na ya mee ihe ọṅụṅụ, nke bụ nke abụọ kachasị mara mma mgbe tomato gasịrị. Na mgbakwunye na ngwa ngwa nri, a na-eji carrots eme ka ahụ dị ike, ebe o nwere uru bara uru nke na-eme ka nke a.
Ụdị parsnip kachasị adịkarị
Pasternak na ihe onwunwe ya na ọdịdị ya dị ka carrots, ọ bụ naanị ọcha ma nwee ihe oriri ndị ọzọ. Ọ na-enwe mmetụta ọgwụgwọ n'oge mgbu nke afọ, na-akpali agụụ, bụ diuretic. Ọ na-edozi nkume na eriri afo na akụrụ, na-ebelata ụkwara, na-emeso ọrịa gynecological na dropsy.
Agrotechnics na-azụlite turnips site na mkpụrụ n'ime ubi ha
Na-eto eto na ibudata gị anaghị etinye nsogbu ọ bụla. Akuku ihe akuku a abughi ihe ozo ma na enye nnukwu ihe ubi. Taa, okpokoro na okpokoro dị iche iche na-eto eto. Ịhọrọ saịtị na ala maka turnips Turnips na-ahọrọ okpomọkụ na oke okpomọkụ ga-emerụ ya ahụ. Ya mere, maka mgbọrọgwụ dị mma na akpa penumbra, nke mere na n'oge okpomọkụ a na-echebe ya site na anyanwụ.
Kedu ihe na-emerụ ahụ na ihe ndị dị ize ndụ?